Wararka - SOO SAARKA SOO SAARKA! Dufanka cusub ee Graphene
PETROKING PETROLEUM HEBEI CO., LTD, Iyada oo ku saleysan warshad noo gaar ah oo la aasaasay 1988. Waxaan leenahay waayo-aragnimo soo saar dufan oo 32 sano ah iyo 10 sano oo waayo-aragnimo ah oo aan la shaqeyneyno in ka badan 40 dal oo ku yaal Aasiya, Afrika, Yurub iyo Ameerika suuqa warshadaha. Waxaan marin u leenahay dekedda Tianjin. Sidoo kale jidka tareenka iyo gaadiidka cirka ayaa aad ugu habboon, kuwaas oo cayminkara waqtiga la keenayo.
Badanaa dhibicda dhibcaha ee dufanku waa 140 darajo illaa 380 darajo. Waxaa loo isticmaali karaa shaashadda, gawaarida waaweyn iyo mashiinnada. Midka ugu caansan waa dufanka Heerkulka Sare, oo loo isticmaali karo gawaarida xamuulka qaada oo si fiican ugu shaqeeya cimilada kulul.
Maalmahan, kooxdeena khabiirada waxay soo saareen dufan graphene cusub, oo dhibicdiisu tahay 600 digrii ilaa 1000 digrii. Dufanka Graphene hadda waa ku cusub yahay Shiinaha waxaanan codsaneynaa rukhsadda.
Muuqaalka 1: yaree khilaafaadka 50%
Muuqaalka 2: yareyso xoqitaanka 50%
Muuqaalka 3: 10 jeer nolosha adeegga dheer, 500000 km dayactir la'aan
Waxa ugu muhiimsan ayaa ah in la yareeyo iska caabbinta wadista oo la badbaadiyo 5% shidaalka
Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale soo saari karnaa badeecooyin cayiman sida ku cad baahida macaamiisha. Haddii aad ka dooraneyso shey hadda jira buugyarahayaga ama aad raadineyso kaalmada injineernimada dalabkaaga, waxaad kala hadli kartaa xaruntayada adeegga macaamiisha wixii ku saabsan shuruudahaaga soo-saarka.
Waxaan u tixgelineynaa tayada sida nolosheena oo waxaan leenahay xakameyn tayo leh oo adag tallaabo kasta oo soo saarid ah oo aan ku adkeyno "Macaamiisha ugu horreysa" sida falsafadeena ganacsiga weligeed ah.
Waxaan bixinaynaa kaliya badeecadaha, laakiin sidoo kale adeegga ugu fiican, kaas oo sii wadi kara xiriirka iskaashiga muddada-dheer ee dhammaan macaamiisha
Waxaan sii shaqeyn doonaa si aan macaamiisha u siino badeecooyin badan oo ka wanaagsan.